Warkii.com-Latest Tech News, Mobile Technology News … » Mahad Salaad oo shaaca ka qaaday XOG ku aadan kiiska Ikraan Tahliil
Muqdisho (warkii.com) – Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si faah faahsan uga hadlay kiiska kraan Tahliil oo la waayey meel aan jaan iyo cirib ay dhigtay, loona heysto NISA.
Mahad Salaad oo xog ku aadan arrintan ku baahiyey bartiisa gaarka ah ee -ga ayaa shaaca ka qaaday in la dilay Ikraan, isla-markaana khaarijinteeda ay qorsheeyeen saddex mas’uul ee haatan ugu sarreysa hay’adda nabad sugida, sida uu hadalk u dhigay.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay ‘in shirqoolka loo maleegay Ikraan lagu bixiyey boqlaal kun oo Dollar iyO ballan-qaadyo’ si ugu dambeyn dib loogu soo celiyo dalka, waxaana kadib u sheegay in marka ay timid Muqdisho la xadiday dhammaan dhaq-dhaqaaqeeda.
Waxa kale oo uu intaasi raaciyey “Wuxuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Ikraan ay wada hadleen kahor inta uusan go’in xiriirkeeda!,”.
Dhinaca kale Xildhibaanada Mahad Salaad ayaa hoosta ka xariiqay inuu fashilmay qorshe kale oo ay diyaariyeen hoggaanka NISA, isla-markaana la doonayey inay Al-Shabaab ku sheegtaan dilka Ikraan, balse ay ka biyo diideen saraakiil sar sare oo ka tirsan kooxdaasi oo qaraabo ay yihiin Ikraan, sida uu ku xusay warbixinta uu shaaciyey xildhibaanku.
Ugu dambeyn wuxuu kula taliyey ehellada Ikraan Tahliil inay qabsadaan areeno dabogal iyo baaritaan ku soo sameeya shirqoolkagabadhooda, si looga gun-gaaro.